5 နေ့မီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5နေ့မီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips
သာရွေးချယ်ဖို့ခဲယဉ်းသည်5လွယ်ကူသောနေ့သင်နှင့်အတူရှယ်ယာမှမီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips. အီတလီ၏ဖက်ရှင်မြို့တော်သည်ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်. ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်နှင့်ပြည့်စုံသည်သာမက, သို့သော်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သမိုင်းရှိပါတယ်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့် လှပသောရှုခင်း အိမ်မှာအကြောင်းရေးဖို့.
1.5နေ့မီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips: ရေကန် Como
မီလန်ကနေကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလွယ်ကူနေ့ခရီးစဉ်ရထားနေ့အဘို့အီတလီ၏အကြီးဆုံးတတိယအိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ရေပိုင်နက်အတွင်းပတ်လည်ဇိမ်ခံအပျော်စီးတွေ့ကြုံခံစား. အဆိုပါ stunning တွေ့ကြုံခံစားဖို့ဘာပိုကောင်းလမ်း အယ်လ်ပိုင်းရှုခင်း လှေ၏လေးသည်ထံမှ, အဖြစ်က၎င်း၏ကမ်းခြေပေါ်တွင်လှပသောရေနားဂုဏ်သတ္တိများမှာလြှို့ဝှကျထှကျသှား peek ယူဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိ.
၏ဗဟိုဧရိယာ ရေကန် Como အများဆုံးလည်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အိုင်၏တစိတ်တပိုင်း, နှင့်အိုင်၏မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်ဒေသများတွင်လည်းစိတ်ဝင်စားသူတို့တည်ရာအရပ်သည်ဤယေဘုယျအားဖြင့်လျော့နည်းအထင်ကြီးကြသည်ကြပေမယ့်: ဒါပေါ့, အတော်လေးနီးစပ်အတူတူအားလုံးအဓိကဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းကန့်သတ်အချိန်တို့နှင့်လည်းဧည့်သည်များအတွက်အဆင်ပြေ.
တစ်ခါတစ်ရံတွင်မြို့ရွာအတူတူနီးစပ်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်, ဒါပေမဲ့ရေကန်များကကွဲကွာ! ပြဿနာမရှိပါဘူး, အိုင်ကိုဖြတ်ပြီးပုံမှန်အစည်းအဝေးကူးတို့တဝိုက်ခရီးသွားလာနိုင်အောင်ရှိပါတယ်လွယ်ကူသည် (ကားတစ်စီးကူးတို့လျော့နည်းမကြာခဏဖြစ်ကြပြီးခရီးသည်ကူးတို့ထက်အနည်းငယ်သာကူးတို့ဆိပ်ကမ်းကနေ operate).
Florence Como မှရထား
မီလန် Como မှရထား
2. စိန့်. Moritz, ဆွစ်ဇာလန်
သငျသညျဆွစ်ဇာလန်ကွာအီတလီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကနေပဲတစ်နေ့ခရီးစဉ်ကြောင်းကိုသင်ယူဖို့အံ့အားသင့်စေခြင်းငှါ. Tirano ထံမှ Bernina Express ကိုအပေါ် Hop နှင့်သင်ရုံနှစျခုနဲ့တစ်နှစ်ခွဲနာရီအတွင်းရှိလိမ့်မည်.
အဆိုပါခရီးကိုယ်နှိုက်ကရကျိုးနပ်သည်: ဒီကမ်ဘာပျေါတှငျ steepest ရထားလမ်းခရီးဖြစ်ပါသည်, ကနေတက် 429 ကျော်အထိမီတာ 1800 ဆွစ်တောင်တန်း၌တည်၏. မီးရထားပြတင်းပေါက်မှကြည့်ရှုနေသည့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် Alpine ရှုခင်းသည်သင်ရထားမှထွက်ခွာမည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုလိမ့်မည်.
သငျသညျစိန့်များ၏ဆွစ်ဇာလန်မြို့မှာတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်. Moritz, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးသောတောင်ပေါ်အပန်းဖြေစခန်း၏တဦးတည်း. ဤသူသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများနှင့်ကျော်ကြားသူများသည်သူတို့၏အားလပ်ရက်များကိုအချိန်ဖြုန်းခြင်းသို့မဟုတ် chalet ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည်.
စိန့်. Moritz ပုံမှန်သာယာလှပအယ်လ်ပိုင်းမြို့မဟုတ်ပါဘူး. ကျနော်တို့ကခံစားရတယ် စည်းစိမ်ကြီသော ထက် ပို. သင့်လျော်သောဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည် လှသောအဆင်း. ပတျဝနျးကငျြဧရိယာမြို့အထူးလေထုနှင့်အတူသော်လည်းလှပပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည်, အံ့သြဖွယ်အားလပ်ရက်လုံးဝအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်.
စိန့်. Moritz ၏ Canton ၏တောင်ဘက်စူးစမ်းလေ့လာမယ့်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေခံစေသည် Graubunden. ဒါဟာဆွစ်ဇာလန်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှတစ်နေ့လျှင်ခရီးစဉ်များအတွက်ကောင်းတစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းမဟုတ်ပါဘူး, ကြောင်းလွန်းယူမယ်လို့အဖြစ် ခရီးသွားအချိန်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းများထဲမှ5နေ့မီလန်အားဖြင့်ရထားသော်လည်း မှစ. Trips! အပြင်မြို့အတွက်တွေကတော့ထံမှ, ဤနေရာတွင်အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များမှာအပြင်ဘက်ဖြစ်သည်. သငျသညျတောင်တက်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, စက်ဘီး, သို့မဟုတ် ဆောငျးရာသီအားကစား, သင်ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဒေသတွင်ရက်သတ္တပတ်အဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်.
3.5နေ့မီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips: Bergamo
Bergamo မှတစ်ဦးအလည်အပတ်မကြာခဏရေကန် Como တစ်ဦးခရီးစဉ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရာအရပျကိုကောင်းစွာရကျိုးနပ်သည်5နေ့မီလန်အားဖြင့်ရထားစာရင်း မှစ. Trips!
သမိုင်းဝင်နံရံများအဟောင်းကိုမြို့ဝိုငျးငါးကီလိုမီတာဆန့်နှင့်အတူ, နှင့်ပေါများအလယ်ခေတ်ဗိသုကာမှာကြည့်ဖို့, ဒါကြောင့်နေ့ကိုဖြုန်းဖို့တော်တော်ရာအရပျလိုသောခရီးသွားဧည့်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောပယောဂရရှိထားသူ.
မြို့ထိပ်မှအောက်ခြေကနေကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာစီး, နှင့် Bergamo ရဲ့အရေးပါသောအထိမ်းအမှတကြည့်ယူ, ထိုကဲ့သို့သောစိန့်အဖြစ်. မာရီယာ Maggiore ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် Colleoni Chapel.
နောက်ဆုံး, ဒါပေမယ့်မရအနည်းဆုံး, Bergamo ၏မယုံနိုင်စရာပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတန်ဖိုးထားရန်အချိန်ခဏယူရန်မမေ့ပါနှင့်, တောင်ကုန်းမိုင်ဆန့်နှင့်အတူ, နှိမ့်ချဝေးကွာသောရေကန် Como ဖို့အားလုံးကိုလမ်း.
မီလန် Bergamo မှရထား
Bergamo ရထားမှ Mantua
ဘယ်လို Bergamo ရထားမှ
ရထား Cremona Bergamo မှ
အဆိုပါ Franciacorta ဒေသအချို့အံ့မခန်းကမ်းလှမ်း, သင်တို့ကိုနမူနာရန်အနိုင်ရဝိုင်, ကြက်သရေအီတလီရှုခင်းအကြားမှာရှိတဲ့.
စပျစ်ရည်ကိုထုတ်လုပ်သူများသူတို့ကိုယ်သူတို့တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းကိုရယူလိုက်ပါ! ဝိုင်ပြုလုပ်နည်း၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုမေးပါ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အရသာဒါမှသူတို့ရဲ့အထူးအမှတ်တံဆိပ်စေသည်.
အဆိုပါ Franciacorta DOCG ဧရိယာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပါဝင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် 3,000 အီတလီ Lombardy ဒေသရှိ Iseo ရေကန်၏တောင်ဘက်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများဖုံးလွှမ်းနေသောစပျစ်နွယ်ပင်ဟက်တာများ. ဤသည်မြောက်မြားစွာနဲ့အခြားနာမည်ကြီးအီတလီ၏တံထွေးထွေးခြင်းအကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်ပါသည် စပျစ်ရည်ဒေသများ, ထိုကဲ့သို့သောအနောက်ဘက် Piedmont နှင့် Conegliano Valdobbiadene အဖြစ် (စူပါပရီမီယံ Prosecco ၏နေအိမ်) အရှေ့ဘက်သို့.
ဒီအချုပ်တည်နေရာ Franciacorta တစ်ဦးရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့ဘို့ပြီးပြည့်စုံဦးတည်ရာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကောင်းစွာထိုက်တန်တဲ့စပျစ်ရည်ကိုခရီးစဉ်စေသည်, မီလန်မှတစ်နာရီခရီးသာ, ဒါကြောင့်တန်းတူအတိုင်းအတာအတွက်လက်လှမ်းနှင့်လှပသောဖြစ်ပါတယ်.
Franciacorta ၏ Boutique ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုခုအထူးပြုပါ, ဒါပေမယ့်စျေးဝယ်လွန်းလည်းကြီးလှ၏! အဆိုပါ Franciacorta ဒီဇိုင်းကိုထွက်ပေါက်တစ်ခုပါးရည်နပ်ရည်စျေးဝယ်သူကမ်းလှမ်းရန်လျှော့စျေးများအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီမှာကုန်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်သင်၏လက်၌ရဖို့သေချာအောင်.
Brescia ရထားမှ Cremona
Bergamo Brescia မှရထား
မီလန် Brescia မှရထား
Brescia ရထားမှ Treviglio
5.5နေ့မီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips: ဗင်းနစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း5မီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. နေ့ခရီးများထွက်ဗင်းနစ်အပါအဝင်မပါဘဲပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ! အဘယ်အရာကိုအီတလီနိုင်ငံရဲ့အများဆုံးတန်ဖိုးကြီးရင်ခုန်စရာမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းမှမီလန်ကနေတစ်ရက်ခရီးစဉ်ကိုယူပြီးထက်ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဗင်းနစ်? Venice ၏ပျော်ရွှင်စရာများအားလုံးကိုတစ်ရက်တည်းထဲသို့ထည့်ရန်ခက်ခဲသော်လည်း, သငျသညျဆက်ဆက်ကြိုးစားနိုင်.
၎င်း၏အေးလှည့်လည်, cobbled လမ်းများ. နာမည်ကျော် Piazza San Marco အတွက်ကော်ဖီဖူး. အမှန်တကယ်အထူးအတွေ့အကြုံရရှိရန်အတွက်တူးမြောင်းများမှတစ်ဆင့်ဂွန်ဒိုလာကိုစီးရန်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်.
သင်တို့သည်နောက်သံသယတော်ဟာတောက်ပဂွများကသဘောကျအောင်ဆက်ဆံပါလိမ့်မည်. အီတလီ၏ထူးခြားသောဗိသုကာလက်ရာများကိုခံစားပါ လူကြိုက်အများဆုံးမြို့ကြီးများ ခရီးသွားဧည့်များအတွက်.
သင်ဆဲအချိန်ရှိပါက, ကျွန်းများအနီးအနားမှာဗင်းနစ်တကျော်ဦး. Murano အစဉ်အလာမှုတ်ဖန်များအတွက်ကျော်ကြား, နှင့်ဖြစ်ကောင်းအိမ်မှာပြန်ယူမယ့် trinket ဝယ်ယူရန်.
အတှေ့အကွုံဖို့အဆင်သင့်5နေ့မီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips? ကျော်ရန်ပေါ်ဦးခေါင်းကို တစ်ဦးကရထား Save ယခု! အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောအဖိုးအခ, အဘယ်သူမျှမလုပ်ရတဲ့!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 လွယ်ကူသောနေ့ရထားဖြင့်မီလန် မှစ. Trips” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-milan-train/?lang=my ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
Bergamo ခွေးရူး Daytrips ဥရောပသမဂ္ဂ မီလန် ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ ခရီးသွား
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား